20 Ma e nwere otu nwoke iberiibe+ n’ebe ahụ, nke aha ya bụ Shiba,+ nwa Bikraị onye ebo Benjamin; o wee fụọ opi,+ sị: “Anyị enweghị òkè n’ebe Devid nọ, anyị enweghịkwa ihe nketa n’ebe nwa Jesi nọ.+ Izrel, onye ọ bụla lakwuru chi ya!”+
2 Ndị Izrel niile wee kwụsị iso Devid ma sowe Shiba nwa Bikraị;+ ma ndị Juda rapaara n’ahụ́ eze ha, malite na Jọdan ruo Jeruselem.+
3 E mesịa, Devid lọrutere n’ụlọ ya na Jeruselem.+ Eze wee kpọrọ ndị inyom iri ahụ,+ bụ́ ndị iko ya ọ hapụrụ ka ha lekọtawa ụlọ, o wee kpọsa ha n’ụlọ ebe a na-eche ha nche, ma ọ nọ na-enye ha ihe oriri. Ya na ha enweghị mmekọahụ,+ kama e mechibidoro ha ụzọ ruo ụbọchị ha nwụrụ, dị ka ndị inyom di ha nwụrụ, ọ bụ ezie na di ha dị ndụ.
4 Eze wee sị Amesa:+ “Kpọkọtara m ndị Juda n’ime ụbọchị atọ, gị onwe gị kwa guzo n’ebe a.”
5 Amesa wee gaa ịkpọkọta Juda; ma ọ lọtaghị n’oge ọ gwara ya ka ọ lọta.
6 Devid wee sị Abishaị:+ “Ugbu a, Shiba+ nwa Bikraị ga-enye anyị nsogbu karịa Absalọm.+ Gị onwe gị, kpọrọ ndị na-ejere onyenwe gị ozi+ chụwa ya, ka ọ ghara ịchọtara onwe ya obodo ndị e wusiri ike wee gbapụ n’ihu anyị.”
7 Ndị ikom Joab+ na ndị Keretaịt+ na ndị Peletaịt+ na ndị dike niile wee soro ya; ha wee si na Jeruselem pụọ ịchụ Shiba nwa Bikraị.
8 Ha nọ nso ná nnukwu nkume dị na Gibiọn,+ Amesa+ wee bịa izute ha. Joab kere ihe n’úkwù, yirikwa uwe; o kekwara mma agha nke dị n’ọbọ ya n’úkwù. Ya onwe ya wee pụta, mma ahụ wee dapụ.
9 Joab wee jụọ Amesa, sị: “Ị̀ dịkwa mma, nwanne m?”+ Joab wee were aka nri jide Amesa n’ajị agba ka o wee susuo ya ọnụ.+
10 Ma anya Amesa adịghị ná mma agha Joab ji n’aka; o wee were ya maa+ ya n’afọ, eriri afọ ya wee wụpụtasịa n’ala, ya ahapụzie ịma ya ọzọ. O wee nwụọ. Joab na Abishaị nwanne ya nwoke wee chụrụ Shiba nwa Bikraị gawa.
11 Otu n’ime ụmụ okorobịa Joab wee guzo n’akụkụ ya, sị: “Onye ọ bụla ihe Joab na-amasị nakwa onye ọ bụla bụ nke Devid,+ ya sowe Joab!”
12 N’oge a dum, Amesa nọ na-atụrụ n’ọbara+ n’etiti okporo ụzọ. Mgbe nwoke ahụ hụrụ na mmadụ niile guzoro n’ebe ahụ, o bupụrụ Amesa n’okporo ụzọ ahụ buba ya n’ọhịa. N’ikpeazụ, o kpuchiri ya ákwà, mgbe ọ hụrụ na onye ọ bụla nke bịarutere n’ebe ọ tọgbọ na-akwụsị guzoro.+
13 Ozugbo o bupụsịrị ya n’okporo ụzọ, onye nke ọ bụla gafeere wee soro Joab chụwa Shiba+ nwa Bikraị.
14 Shiba wee gafere ebo niile nke Izrel ruo Ebel nke Bet-meaka.+ Ma ndị Bikraị niile zukọtara wee chụrụ ya banye n’obodo ahụ.
15 Ha wee bịa nọchibido ya n’Ebel nke Bet-meaka wee maa ékpè gburugburu obodo ahụ,+ n’elu ékpè nke gbara ya gburugburu. Ndị niile ha na Joab so nọ na-egwu ala n’okpuru mgbidi ahụ, ka ha kwatuo ya.
16 Otu nwaanyị maara ihe+ wee si n’obodo ahụ malite iti mkpu, sị: “Geenụ ntị, geenụ ntị! Biko, gwanụ Joab, sị, ‘Bịa nso n’ebe a ka m gwa gị okwu.’”
17 O wee garuo ya nso, nwaanyị ahụ wee jụọ, sị: “Ọ̀ bụ gị bụ Joab?” o wee zaa, sị: “Ọ bụ m.” O wee sị ya: “Gee ntị n’okwu ohu gị nwaanyị.”+ O wee sị: “M na-ege ntị.”
18 O wee gaa n’ihu ịsị: “N’oge gboo, a na-ekwukarị, sị, ‘Ka ha jụọ ase n’Ebel, ha na-esikwa otú a eme ka okwu bie.’
19 M na-anọchite anya ndị na-eme udo+ na ndị kwesịrị ntụkwasị obi+ n’Izrel. Ị na-achọ igbuchapụ otu obodo+ na otu nne n’Izrel. Gịnị mere ị ga-eji loda+ ihe nketa+ Jehova?”
20 Joab wee zaa, sị: “Tụfịakwa! Agaghị m eloda ya, agaghịkwa m ebibi ya.
21 Ọ bụghị otú ahụ ka ọ dị, kama otu nwoke nke si n’ógbè Ifrem bụ́ ugwu ugwu,+ onye aha ya bụ Shiba+ nwa Bikraị, eweliwo aka ya imegide Eze Devid.+ Kpọpụtanụ naanị ya,+ m ga-ahapụkwa obodo a.”+ Nwaanyị ahụ wee sị Joab: “Lee! A ga-esi ná mgbidi tụfetara gị isi ya!”+
22 Ozugbo ahụ, nwaanyị ahụ ji amamihe+ gakwuru ndị obodo ya niile, ha wee gbupụ Shiba nwa Bikraị isi wee tụọrọ ya Joab. O wee fụọ opi,+ ha wee si n’obodo ahụ lasasịa, onye ọ bụla wee laa n’ụlọ ya; Joab wee laghachikwuru eze na Jeruselem.
23 Joab bụ onyeisi ndị agha+ niile nke Izrel; Benaya+ nwa Jehoyada+ bụkwa onyeisi ndị Keretaịt+ na ndị Peletaịt.+
24 Adoram+ bụkwa onyeisi ndị a kpọọrọ ịrụ ọrụ mmanye; Jehọshafat+ nwa Ahaịlọd bụkwa onye na-edekọ ihe.
25 Shiva+ bụkwa odeakwụkwọ,+ Zedọk+ na Abayata+ abụrụkwa ndị nchụàjà.
26 Aịra onye Jeya ghọkwara onye nchụàjà+ Devid.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D10%26Chapter%3D20%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl